ကိုယ့်အလှတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖော်ပြလို့ရပြီဖြစ်တဲ့ Mask – YANGON STYLE
ကိုယ့်အလှတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖော်ပြလို့ရပြီဖြစ်တဲ့ Mask
လက်ရှိအနေအထားအရ ဘယ်သူမဆို Mask အုပ်ပြီးမှ အပြင်ထွက်ရမယ့်အခြေအနေပါ။ ဒီလိုဆိုတော့ ပြုံးပြလည်းမမြင်ရ မိတ်ကပ်လိမ်းလည်း မမြင်ရတော့ပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက် XC99 Mask ရှိပါတယ်။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း filter ပါတဲ့ Mask အကြည်လေးပါ။
XC99 Mask တွေဟာဗီယက်နမ်နိုင်ငံထုတ် fabric mask အစားထိုးပါ။ N95 တို့ surgical mask တို့လိုတော့မကာကွယ်နိုင်သေးပါဘူး။ အဆိုပါ Mask လေးတွေဟာ Biomedical Application နဲ့ Food Industry မှာ သုံးတဲ့ TPU Plastic Material ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အဲ့ filter က Germanic coating ပါတယ် ၊ သူက antibacterial filter ပါ ။ 100% anti-droplets ( သူများ နှာချေ ချောင်းဆိုး က အရည်အမှုန်အမွှား ) ၊ anti- UV တဲ့ (ခု နောက်ပိုင်း ကားမှန်တွေလိုပေါ့ UV ကာတာ ပါတယ် ) ။
အရောင်ကတော့ ၄ရောင်ရှိပါတယ်။ အကြည် / အမဲအကြည် / အမဲ အရောင်ပိတ် / အဖြူ အရောင်ပိတ် ပါ၊ ကြိုး က adjust လုပ်လို့ရပါတယ် ၊ အပို fabric strap လည်း ပါ၀င်ပြီး disinfectant spray နဲ့ တင် သန့်ရှင်း ရေး လုပ်လို့ရပါတယ်။
သူက ဘူးနဲ့လာပြီး တစ်ဘူးကို 19,000 Ks ကျသင့်ပါတယ်။ ၁ဘူးမှာ ဘာတွေပါ၀င်သလဲဆိုရင်တော့
1. 1 pc – Mask
2. 1 pc – Vent
3. 1 pc – Filter
4. 1 pair – Earring Strings အစရှိတဲ့ ပစ္စည်း ၄မျိုးပါ၀င်ပါတယ်။
Vent ကတော့ Styling လုပ်ချင်သူများအတွက်ပါ ၊မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကာလာများကို အပို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ filterတစ်ခုကို ရက်၃၀ အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် နေ့တိုင်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ၁၅ရက်တစ်ခါ လဲပေးဖိုလိုအပါပါတယ်။
Available in Clear / Black design – အရောင် ၂ ရောင် ရှိပါတယ် (အမဲ/အကြည်)
Makeup friendly – မိတ်ကပ်လှလှလေးလိမ်းထာတာလေးတွေလည်း မကွယ်သွားတော့ဘူး
Easy to breathe – အသက်ရှူရတာလည်း လွယ်ကူတယ်
Reusable | Washable – သေချာ ဆေးကြောပြီး ပြန်သုံးလို့ရတယ်
Adjustable – မျက်နှာ အရွယ်အစား တိုင်းနဲ့ လိုက်အောင် ကြိုးလေး၂ ကြိုးပါပါတယ်
တခုကို 19,000 kyats ( strap ၊ filter ၊ valve အပို တခုစီပါ) ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တရား၀င်ရောင်းချနေတာကတော့ XC99 Myanmar ဖြစ်ပါတယ်။
XC99 Myanmar Facebook Page – https://www.facebook.com/xc99myanmar
အသေးစိတ်ကို အဆိုပါ Page မှာ သွားရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။